Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): ယိကျင်း ဗေဒင် နှင့် ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်ကြီးများ။
ယိကျင်း ဗေဒင် နှင့် ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်ကြီးများ။
တကယ်တော့ ယိကျင်း ဗေဒင်ပညာက- တရုပ်တို့၏ ရှေးဟောင်း ပညာဖြစ်၏။
အနှစ် ၃၀၀၀ ကျော်ခန့် ကြာခဲ့ပြီဟုလည်း သိရ၏။
အကြောင်း တိုက်ဆိုင် လျှင်တော့- ယိကျင်း ပညာ၏ လျှို့ဝှက်ချက် များ အကြောင်းကို စာအုပ် တစ်အုပ် အဖြစ် ရေးသား ပေးမည် ဖြစ်သော်လည်း- ယခု ဆောင်းပါးတွင်တော့- ယိကျင်း ၏ အနှစ်သာရ သဘော ဖြစ်သည့် ၆၄- ကိန်း၏ ထပ်ပြန် တလဲလဲ ဖြစ်တတ်သော cycle ကို မူတည် ဖေါ်ထုတ်ထားသည့် “သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ် အကြောင်း အနည်းငယ် ကို ဝေမျှ လိုပါ၏။
“သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ်ကို တီထွင် ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူ- ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သည့် ဆရာကြီး တာရင့်စ် မက်ကန်နာ အနေဖြင့်- စကြ၀ဠာတွင်- အရာအားလုံး တို့သည် တစ်ခု နှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် ဆက်စပ် နေကြပြီး၊ ၄င်းတို့သည် တစ်ခုသော ရက်တွင် ဆုံချက်အဖြစ်- တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားကြမည် ဟု ယူဆ ထားသည်။
သူသည် မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုပရိုဂရမ်သည် DOS Version တစ်ခု ဖြစ်သဖြင့်- ယခု ၀င်းဒိုး ကွန်ပျူတာများ နှင့် တိုက်ရိုက် စေခိုင်း၍ မရသေးပါ။
၄င်းကို ၀င်းဒိုး ပရိုဂရမ် အဖြစ်တည်ဆောက်ရန်လည်း မိုးတား အဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြင်ဆင် ကြိုးစား နေပါသည်။
လူပြောသူပြော များလှသော ၂၁-ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကိစ္စကို စာဖတ်သူလည်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍လည်း- ကျွန်တော့ အနေဖြင့် စာတမ်းတို လေး တစ်ခု ထုတ်ဝေခဲ့ပါသေး၏။
“သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ် အရ- လှိုင်းများ၏ ထပ်ပြန် တစ်လဲလဲ- ပေါ်ပေါက် ဆင့်ရိုက်မှုများကို အလွယ်ဆုံး နည်းဖြင့် လေ့လာမည် ဆိုပါက- ၂၁-ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ရက် (December 21, 2012) နေ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အဦး ကြီးများ တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရသော စက်တင်ဘာလ ၉-ရက်၊ ၂၀၀၁ (September 11, 2001) နေ့တို့ကို နှုတ်ပေးကြည့် လိုက်ပါ။
ရက်ပေါင်း (4119) ရက် ရပါမည်။
ထိုရက်ကို ယိကျင်း ၏ ကိန်းဖြစ်သော (တစ်နည်း အားဖြင့်- “သုည အချိန်လှိုင်း” ကိန်း) ၆၄ ဖြင့် စားကြည့်လိုက်ပါ။
အဖြေ မည်မျှ ရပါသနည်း။
အဖြေသည် ၆၄ ပင် ဖြစ်နေ၏။
အောက်တွင် တွက်ပြထားသည်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။
ကွာခြားသော ရက်ကို နှစ်၊လ၊ရက် ဖွဲ့လိုက်မည် ဆိုပါက အထက်တွင် ပြထားသည့် အတိုင်း ၁၁-နှစ်၊ ၃-လ၊ ၁၀-ရက် ဖြစ်၏။
၄င်းကို အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်လိုက်မည် ဆိုပါက- ၂၀၁၁ -ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၀-ရက်ဟု ရည်ညွှန်း နေ၏။
တိုက်ဆိုင်သည်လားတော့ မသိ၊ ဂျပန် နိုင်ငံ သမိုင်းတွင် အဆိုးဆုံးသော ဆူနာမီ နှင့် အနုမြူ အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နေ့မှာ- ထိုနေ့၏ နောက်ရက် ၂၀၁၁ -ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၁-ရက် ဖြစ်နေ၏။
လူသား တို့၏ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာ လိုက်ပြန်သော်- ယခု အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်က- “သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ် ဖြင့်- တွက်ချက်ထားသော ဂရပ် အနိမ့်အကျ ဖြစ်၏။
“သုည အချိန်လှိုင်း” ဂရပ်ဖ် တွင် နိမ့်ကျသွားသော ထိုနှစ်များတွင် အောက်ပါ ဖြစ်ရပ်ကြီးတို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရ၏။
၁၈၈၈-ခုနှစ် မေလ ၃၁ တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် South Fork Dam ဆည် ချို့ယွင်းမှု ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရသော Johnstown ရေကြီးမှုသည် သဘာဝ အန္တရယ် ဟု မသတ်မှတ်သောကြောင့်- အထက်ပါ စာရင်းတွင် မပါရှိသော်လည်း- စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၂၂၀၉ ဦး ရှိခဲ့သဖြင့် သမိုင်းဝင် ဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါ၏။
“သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ် မှ ဖေါ်ပြခဲ့သော ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး။
လူသန်းပေါင်း များစွာ သေကြေပျက်စီးခဲ့ရသော၊ မသေဆုံးသူ များစွာ တို့မှာလည်း ကြီးစွာ ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရသော ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး သည် စက်တင်ဘာလ ၁-ရက်၊ ၁၉၃၉ မှ၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂-ရက် နေ့အထိ- ၆ နှစ် နှင့် ၁-ရက် ကြာမြင့်ခဲ့၏။
စစ်မဖြစ်မီ ခေတ် နှင့် စစ်ပြီး ခေတ်သည် - ကမ္ဘာ့လူသားတို့၏ လူနေမှု အနေအထားများ၊ နည်းပညာများ တို့ကို ကြီးစွာ ပြောင်းလဲ ခဲ့သဖြင့်- ဤကာလသည် - ခေတ်ကြီး ၂-ခုကို ပိုင်းခြားထားသည့် ပမာလည်း ဖြစ်နေ၏။
၄င်း အနေအထားကို “သုည အချိန်လှိုင်း” ဂရပ်မှ ထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြနေ၏။
အကယ်၍- နှစ်ကာလ ကို အနှစ် ၁၁၀ မြင်ရသည့် အနေအထားသို့ ပြောင်းလိုက်သော- ၁၉၉၇- အာရှ စီးပွားပျက် ကာလ Asian Financial Crisis ကိုပါ တစ်ဆက်တည်း တွဲမြင်လာရတော့၏။
အခြားခြားသော အနေအထား များစွာကို “သုည အချိန်လှိုင်း” နည်းစနစ် ဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်သော်လည်း- ယခု ဆောင်းပါးကို ဤမျှဖြင့် တစ်ခန်းရပ်ပါဦးမည်။
ဆရာ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်အပြီးမှာ Nicolas Cage ရဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင် Knowing ဇာတ်ကားကို ပြေးမြင်ယောင်မိပါတယ်.. တခါမှ မကြားဖူးသေးတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတအတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဆက်ဖတ်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Very interesting and coincidental. You are genius in astrology knowledge in all aspects. This article should be published asasmall book.